अर्थ / वाणिज्य Archives - Pahilo Online
विपन्नको सारथी बन्दै कमलपुर सामुदायिक वन
बुधबार, २५ फाल्गुन २०७८, १४:११
लेटाङ । लेटाङ–३ स्थित कमलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विपन्न उपभोक्तालाई बंगुर पाठा र मकै छर्ने मेसिन वितरण गरेको छ । वन समूहले कार्यालय परिसरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी
शनिबार, १ माघ २०७८, १३:१०
मोरङ । केराबारी गाउँपालिकामा रहेका व्यापारी व्यवसायीहरुको साझा संस्था केराबारी ब्यापार प्रबन्ध समितिको छैंठौं साधरण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । केराबारी ८ स्थित बन्धु पार्टी प्यालेसमा भएको साधरण सभाले
नयाँ गोरेटो साकोसको साधरण सभा सम्पन्न
शुक्रबार, २३ पुष २०७८, १९:५४
लेटाङ्ग । उत्तरी मोरङ्गको लेटाङ्ग नगरपालीकालाई सेवा क्षेत्र बनाएर संचालनमा रहेको नयँ गोरेटो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आठौं वार्षिक साधारणसभा विविध कार्यक्रम गरी आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ
मंगलवार, २१ मंसिर २०७८, १९:०१
विपुल सुवेदी सुन्दरहरैँचा । एकता मिडिया प्रा.लि. जनमनको बोली रेडियो सुसेली १०६.३ मेघाहर्ज तथा सुधांशु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा रमेश खड्का सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुभएको छ । मंगलबार
महिला जागृति सामुदायिक वनद्वारा उपभोक्तालाई अचार बनाउने तालिम
मंगलवार, १६ कार्तिक २०७८, २२:१०
शनिश्चरे । विपन्न उपभोक्ताहरुलाई आयआर्जन तथा व्यवसायमा आकर्षित गराउने उद्देश्यले पथरीशनिश्चरे–९ स्थित महिला जागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले अचार बनाउने तालिम सञ्चालन गरेको छ । छ दिनसम्म सञ्चालन भएको तालिमको
बुधबार, १० कार्तिक २०७८, २२:१४
शनिश्चरे । मोरङको पथरीशनिश्चरे–९ स्थित महेन्द्रचौक साना किसान कृषि उत्पादन समूहले रासायनिक मल न्युनिकरण, प्राङ्गारिक खेति प्रबर्धन तथा पशुपंक्षी पालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । समूहका अध्यक्ष डिल्लिराम भट्टट्टाईको
सोमबार, ८ कार्तिक २०७८, २२:०७
शनिश्चरे । पथरीशनिश्चरे वडा नं. ४ ले अविरल वर्षाका कारण क्षती भएको किसानको खेतबारी अनुगमन गरेको छ । आज (सोमबार) प्रतिनिधि मुलक रुपमा वडाका विभिन्न स्थानको अवलोकन गरिएको वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर
शंकर सहकारी संस्थाद्वारा अशक्त ३२ जनालाई आर्थिक सहयोग
शुक्रबार, १५ आश्विन २०७८, १८:३६
पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे १ मा स्थापित शंकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो आठौ वार्षिक साधारण सभामा विपन्न, अशक्त ३२ जनालाई सहयोग प्रदान गरेको छ । सुक्रबार भएको साधारण
कुलझोरा फलफुल तथा तरकारीको अध्यक्षमा ईश्वर
आईतवार, १० आश्विन २०७८, २०:०५
राजघाट । कुलझोरा फलफुल तथा तरकारी उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड को ११औं चुनावी साधारणसभाबाट नयां नेतृत्व चयन भएको छ । आइतबार सम्पन्न संस्थाको साधारणसभाले ईश्वर बरालको अध्यक्षतामा निर्विरोध नयां नेतृत्व
विराटचोकमा सेमिओटिक ट्रेडर्स संचालनमा
बिहीबार, ३१ भाद्र २०७८, २३:०१
विपुल सुबेदी ३१ भाद्र विराटचोक । २०७८ तेह्रथुम जिल्लामा जन्मिएर ११ वर्षको कलिलो उमेरमा कपडा व्यवसाय देखि कुटानी पिसानी मिल संचालन गरि व्यवसाय यात्रा सुरु गरेका गोबिन्दप्रसाद अधिकारी (तेह्रथुमे)